I-FAA inyanzela iVerizon kunye ne-AT&T ukuba imise ukukhutshwa okupheleleyo kwe-5G
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » I-FAA inyanzela iVerizon kunye ne-AT&T ukuba imise ukukhutshwa okupheleleyo kwe-5G
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
I-FAA inyanzela iVerizon kunye ne-AT&T ukuba zilibazise ukukhutshwa okupheleleyo kwe-5G.
I-Federal Aviation Administration ilumkisa ukuba ukwanda kwi-bandwidth ethile kuya kuphazamisa ngokunzulu amabhanti asetyenziselwa ukhuseleko lwenqwelomoya.
Ukukhutshwa okucetywayo kwe-5 kaDisemba kuwo wonke amaza e-C-band kuya kulibaziseka kude kube yi-5 kaJanuwari ubuncinane.
I-Verizon kunye ne-AT&T zinethemba lokusebenza kunye ne-FAA ukulungisa iinkxalabo zayo malunga nokuphazamiseka okunokubakho kwizixhobo zokhuseleko ze-cockpit.
Ukuhamba ngenqwelomoya e-US sele kunengxaki mva nje, ngomnqweno wasemva kobhubhane wokubhabha ubaleka ngokuchasene nabasebenzi kunye nokunqongophala komqhubi wenqwelomoya.
Verizon kwaye AT & TIcwangciselwe uDisemba 5 ukukhutshwa okupheleleyo kwe-5G, enika “isantya esilungileyo ukuya-esikhulu” kuluhlu oluphakathi lwefrikhwensi yerediyo, ilibazisekile emva FAA ilumkise ukuba ukwandiswa kwe-bandwidth ethile kuya kuphazamisana kakhulu namabhendi asetyenziselwa ukubonelela ngokhuseleko lweenqwelomoya zorhwebo.
Ukukhutshwa okupheleleyo kuzo zonke iifrikhwensi ze-C-band ziya kulibaziseka kude kube nguJanuwari 5 ubuncinane, AT&T kunye Verizon kwaziswa.
Iinkampani zinethemba lokusebenza kunye ne Ulawulo lweeNkampani zoLawulo lweeAviation ukujongana neenkxalabo zayo malunga nokuphazamiseka okunokubakho kwisixhobo sokhuseleko segumbi lokuhlala ekwasebenzisa ibhendi ye-C.
Ngelixa iinkampani zikhuphe i-70 yeebhiliyoni zeedola ezidityanisiweyo zokufumana ukufikelela kwi-C-band kwifandesi ekuqaleni kwalo nyaka, ishishini leenqwelomoya likuchasile ukusetyenziswa kwalo, lisithi "ukuphazamiseka okukhulu ekusebenziseni iNkqubo yeSizwe yoMoya kunokulindelwa" ababoneleli bafumana idibs kuloo bandwidth ye5G yabo.
Iinkampani sele zinesantya esiphezulu sokuqhagamshelwa kwe-5G kwiibhendi eziphezulu, apho zisebenzisa itekhnoloji ye-millimeter-wave, kunye ne-low-band frequency, ezicothayo ngokubonakalayo. Ngelixa ingezizo iinkampani ezimbini kuphela ezikhupha i-5G, inkampani ekhuphisana nayo i-T-Mobile sele ithathele phezulu i-chunk enkulu ye-mid-band spectrum engekasebenzi (okwangoku) kwi-C-band.
Ishishini lenqwelomoya kubonakala ngathi lizama ukufumana ingqalelo yeenkampani zefowuni kangangexesha elithile ngoku, ngokubamba intlanganiso ngo-Agasti kunye neKomishoni yoNxibelelwano lwe-Federal ukulumkisa ngongquzulwano oluzayo phakathi kwezi ndawo zimbini. Ngaphandle kokuba kukho into eyenziwayo, balumkisa, 'ukuphazamiseka okukhulu' kunokulindeleka, kunyanzeliswe FAA 'ukunciphisa kakhulu amandla okusebenza kweenqwelomoya.'
Ukusilela ukukholisa abanye malunga nokungxamiseka kwalo mbandela, i-FAA ikhuphe 'ibhulethini yolwazi olukhethekileyo' ekuqaleni kwale veki ichaza uphazamiseko olunokubakho lwe-5G kunye nezixhobo zokhuseleko lwenqwelomoya ezixhomekeke ekufikeleleni kwiialtimita zikanomathotholo. Ukuza kuthi ga kule veki, i-arhente ibicwangcise ukukhupha izigunyaziso ezisemthethweni ezithintela ukusetyenziswa kweenkqubo ezizenzekelayo, kubandakanya neyokunceda abaqhubi beenqwelomoya ukuba babhabhe kwaye bahlale kwimozulu embi. Izithintelo zenzelwe ukuthintela naluphi na ukuphazamiseka kwiimpawu ze-5G eziphazamisa i-bandwidth yazo, njengoko abaqhubi be-5G kulindeleke ukuba bakhulule iteknoloji yabo ngoDisemba 5 kwiimarike ze-46.
Ngelixa bevuma ukuba akuzange kubekho imiba 'yokuphazamiseka okuyingozi' kunye ne-5G kwamanye amazwe, abaqhubi beenqwelomoya balunyukiswa ukuba kufuneka 'balungele ukuba kungenzeka ukuba ukuphazamiseka kwe-5G kunye nobunye ubuchwepheshe bunokubangela ukuba izixhobo ezithile zokhuseleko zingasebenzi,' ecebisa ukuba ukunyanzeliswa ukulungisa imiba 'inokuchaphazela imisebenzi yenqwelomoya.'
Iqela lokurhweba elingenazingcingo i-CTIA igxininise ukuba uthungelwano lwe-5G lungasebenzisa ngokukhuselekileyo i-spectrum, ekhomba kumazwe angama-40 apho ayesebenza ngaxeshanye kunye neekhomputha zokhuseleko lwe-airline.
Ukuhamba ngenqwelomoya e-US sele kunengxaki mva nje, ngomnqweno wasemva kobhubhane wokubhabha ubaleka ngokuchasene nabasebenzi kunye nokunqongophala komqhubi wenqwelomoya. Oku kunqongophala kuye kwandiswa kukwandisa izigunyaziso zogonyo kwilizwe liphela.